Voadika ny 07 Jolay 2008 20:22 GMT
I Mohammed Omer dia mpanao gazety mbola herotrerony avy o Rafah, any Gaza. Vao herinandro maromaro lasa izao dia nahazo ny loka “Martha Gellhorn Award” izy noho ny fanadihadiana nataony mikasika an'i Gaza, raha vao 24 taona monja. Tamin'ny fiverenany nefa dia notazomin'ny Shin Beit i Omer, ary tapak'andro taorian'io dia tao amin'ny fiara mpitondra marary izy no tazana. Nanaiky moa ny mana-pahefana ao Israely fa nampihato an'i Omer, saingy nambaran'izy ireo “fanondranana entana antsokosoko” no antony nihazomana azy ary ny ratra taminy dia vokatry ny “fianjerana” fotsiny. Nisy mpaka sary namoaka sarin'i Omer eo amin'ny fandriana ny amin'ny hopitaly, ny mpitoraka blaogy kosa naneho ny hatezeran'izy ireo.